PPC vs. SEO ma ọ bụ Nledo vs. Nledo
PPC na SEO: Nledo na Nledo
Tuesday, February 22, 2011 Monday, October 12, 2015 Chris Bross
Ọ dị onye na-echeta ochie Spy vs. Spy comics? Ihe ọchị! Onye ọ bụla Nledo mgbe niile na-akpa nkata ịkarị nke ọzọ. E nwere ụdị echiche azụmahịa yiri nke a taa mgbe ụlọ ọrụ na-atụle atụmatụ azụmaahịa nyocha igwe. Ndị azụmaahịa na-ahọrọ ozugbo: Lezienụ Kwa Pịa (PPC) na Organic Search (SEO).
Ebumnuche nke usoro ịzụ ahịa ọchụchọ bụ ịmepụta ndu ma ọ bụ ahịa. PPC & SEO onye ọ bụla nwere uru ha bara ma nwee ike ịkwado ya iji nweta nnukwu ROI.
Ihe omume PPC & SEO nwere ike inwe mmetụta dị mkpa:
Mmụba nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 12% na ngwakọta ntụgharị ọnụ mgbe akwụ ụgwọ na Organic Links dị otu oge
Bawanye uru a na-atụ anya ya, sitere na 4.5% na 6.2% mgbe njikọ SEO na PPC pụtara n'otu oge ma e jiri ya tụnyere enweghị otu ma ọ bụ nke ọzọ
Isi Iyi: Yang & Ghose, NYU, 2009
PPC na SEO - I Nwere Enyi M!
Ọchịchị SERP - veragba ụgwọ ma PPC ma SEO ọnụ ga-enweta òkè ka ukwuu nke Nsonaazụ Nchọgharị Nchọgharị (SERP). Inwe ala na ụlọ nke otu azụmahịa biri, pụtara obere ihe maka ndị na-asọmpi ya. Ọzọkwa, a ga-enwe ohere dị ukwuu ịbawanye mkpokọta pịa-site na ọnụego gị.
Nghọta Cross Channel - PPC gụnyere ihe karịrị mkpụrụokwu, ọ bụkwa maka ịmepụta ozi ederede Ed iji gbaa ume site na ịpị peeji nke iji bulie ntughari. Iji PPC Text Ads dị elu na-arụ ọrụ dị ka akụkụ nke On-Site SEO meta nkọwa kwesịrị ịbawanye organic pịa-site. Nghọta sitere na peeji PPC ọdịda nwere ike ime ka ntugharị saịtị gbanwee.
Meziwanye Nsonaazụ Ya - Ihe niile na nyocha ọchụchọ na-amalite site na nyocha isiokwu. Họrọ SEO lekwasịrị anya isiokwu bụ n'ezie onye gụrụ akwụkwọ guessing egwuregwu. Ọzọkwa, usoro okike anaghị eme n’otu ntabi anya ma ọ bụrụ na ịga nke ọma na SEO chọrọ isiokwu na-ewe oge. PPC dị nnọọ mfe iji mejuputa ya na ngwa ngwa iji nweta data arụmọrụ. Jiri PPC iji nyochaa ma ọ bụ na isiokwu abụghị ihe dị oke ọnụ ma ọ bụ na ọ bụghị tupu oge na akụrụngwa ejiri mepụta mkpọsa SEO nke nwere ike ọ gaghị ewepụta ego.
N'ebe a na-agbanwe agbanwe n'ịntanetị taa, azụmahịa kwesịrị ịtụle atụmatụ ahịa ọchụchọ nke bụ ngwakọta na-aga n'ihu nke PPC na mgbalị SEO iji nweta oke nloghachi na itinye ego.
Tags: nyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa PịappcChọọ MarketingAspy
Kedụ ka I si enyocha Social Media?
Mar 1, 2011 na 4: 22 PM
Nnukwu ndụmọdụ, PPC nwere ike ịbara SEO uru ka ị na-akọwapụta ọkachasị na okwu nyocha isiokwu.
Mar 26, 2014 na 10: 31 PM
Isi okwu bara uru bụ otu n'ime igodo iji nwee ihe ịga nke ọma na Google AdWords. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnwa ọnwụnwa ịgụnye ụdị isiokwu dị iche iche ị nwere ike iji aka gị, mara na nke a na-abụkarị ndị mgbasa ozi # 1 mehiere mgbe ha na-eke mkpọsa mbụ ha. Only na-achọ atụmanya ndị "Chọrọ Gị Ugbu a" ma bụrụ ndị a kpaliri ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ zụta ọrụ gị ma ọ bụrụ na ha pịa mgbasa ozi gị. Ndị mmadụ na-agwa gị okwu na-ezighi ezi mgbe niile ma ọ na-ewute ha nnukwu oge. Companylọ ọrụ m na-efufu ihe dị ka $ 0.67 kwa pịa ruo mgbe Simon gafere na RDM (email ya bụ simon.b@resultsdriven.org) nyeere anyị aka inweta ọbọgwụ anyị n'usoro na mkpọsa ma ugbu a ọ na-eme $ 2.19 kwa pịa na nkezi kama - $ 0.67. Ọ bụrụ na gị na ya kwuo okwu mee ka ọ mata onye otu enyi gị nke Dean Jackson.